ပေါရှား (ဂြိုဟ်ရံလ) - ဝီကီပီးဒီးယား
66,097.265 ± 0.050 km
0.00005 ± 0.00008
0.5131959201 ± 0.0000000093 d
9.37 km/s[မှတ်စု ၁]
0.05908 ± 0.039° (to Uranus' equator)
156 × 126 × 126 km
67.6 ±4km
~57,000 km²[မှတ်စု ၁]
~1,300,000 km³[မှတ်စု ၁]
~1.7×10၁၈ kg[မှတ်စု ၁]
~0.023 m/s2[မှတ်စု ၁]
~0.058 km/s[မှတ်စု ၁]
ပေါရှား သည် ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်၏ အတွင်းပိုင်း ဂြိုဟ်ရံလဖြစ်ပြီး ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်၌ ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ ၏ ဓာတ်ပုံမှတဆင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မူလက ယာယီအမည် S/1986 U 1 ဟု ပေးခဲ့သည်။ ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ တွင်ပေါ်သော ပေါရှား၏ ပုံရိပ်မှာ ရှည်မျောမျောဖြစ်ပြီး ယင်း၏ ဝင်ရိုးသည် ယူရေးနပ်စ်ဘက်သို့ မျက်နှာမူလျက်ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်မှာ မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပြီး ဟာဘယ် အာကာသ တယ်လီစကုပ်၏ ရောင်စဉ်များမှ လေ့လာတွေ့ရှိရသည်မှာ ပေါရှားတွင် ရေခဲများ တည်ရှိသည်ဆိုသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ Calculated on the basis of other parameters.
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ "The Orbits of the Inner Uranian Satellites From Hubble Space Telescope and Voyager2Observations" (1998). The Astronomical Journal 115 (3): 1195–1199. doi:10.1086/300263. Bibcode: 1998AJ....115.1195J.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ Karkoschka, Erich (2001). "Voyager's Eleventh Discovery ofaSatellite of Uranus and Photometry and the First Size Measurements of Nine Satellites". Icarus 151 (1): 69–77. doi:10.1006/icar.2001.6597. Bibcode: 2001Icar..151...69K.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Planetary Satellite Physical Parameters။ JPL (Solar System Dynamics) (24 October 2008)။ 12 December 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Williams၊ Dr. David R. (23 November 2007)။ Uranian Satellite Fact Sheet။ NASA (National Space Science Data Center)။ 12 December 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Smith, B. A. (January 16, 1986). "Satellites of Uranus". IAU Circular 4164. Retrieved on 29 October 2011.
↑ "Hubble Space Telescope NICMOS Multiband Photometry of Proteus and Puck" (2003). The Astronomical Journal 126 (2): 1080–1085. doi:10.1086/375909. Bibcode: 2003AJ....126.1080D.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပေါရှား_(ဂြိုဟ်ရံလ)&oldid=716242" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။